Ndị na-ebubata ya na ọka / ọka wit / osikapa na-ewe ihe ubi na ụlọ ọrụ - China ọka / Wheat / Rice Harveste Manufacturers
Self-propelled Wheat Ikpokọta ubi Machine
Product Ihe 4LZ-7 / 4LZ-8 onwe-propelled ọka ikpokọta ubi na-bụ-eji maka owuwe ihe ubi ọka wit, na nwekwara ike ihe ubi osikapa. Igwe ahụ nwere ike mechaa owuwe ihe ubi, nzọcha mkpụrụ, nkewa, ihicha na arụmọrụ ndị ọzọ n'otu oge. Igwe ahụ nwere usoro kọmpat, ọrụ dị mma, ọrụ na-agbanwe agbanwe, arụmọrụ dị elu na ịnweta ego ngwa ngwa. Nkọwapụta Nka na ụzụ Nkọwapụta ikike kw 110 Nchịkọta Dimension (L * W * H) mm 6740 * 2940 * 3380 ngụkọta kilogram 5640 ...
Ọka na-ewe ọka
4YZ-4B / 3B onwe-propelled ọka owuwe ihe ubi igwe bụ ụdị nke ọka owuwe ihe ubi igwe na ndabere nke absorption nke ma ụlọ na mba ọzọ elu technology nke ọka ntị ikpokọta ndị na-ewe ihe ubi. Igwe ahụ bụ ihe ọhụụ na imewe, ọ nwere ike mezue usoro arụmọrụ niile site na nchịkọta ọka, na-ebufe, na-ebugharị, ma na-akwakọba iji belata ahịhịa na imegharị ya n'otu oge. A na-akacha ya iji were ọka ọka. Nka na ụzụ nkọwapụta Nka na ụzụ 4YZ-4B ...